Archive du 20170415
Hery Rajaonarimampianina Prezida saribakoly ?
Tamin�ny andron�ny tetezamita dia efa nalaza fa nataon�i Andry Rajoelina sy ny manodidina azy saribakoly i Hery Rajaonarimampianina. Nalaza fa nataon�ireo lava tanana akaiky kokoa an�i Andry Rajoelina fakana vola ny minisiteran�ny vola sy ny tetibola notantanany tamin�izany fotoana.
Fitondrana Rajaonarimampianina Haongana amin�izay, hoy ny TFI
Tsy azo hihodivirana intsony ny fanorenana ifotony fa tsy maintsy atomboka, hoy ry zareo avy eo anivon�ny hetsika politika Tolona ho amin�ny fanorenana ifotony na TFI tetsy amin�ny Espace dera
Antoko Asandratro ny fireneko �Ny Frantsay sy Amerikaninana no fahavalontsika�
Ny orinasam-pirenena dia homena ny frantsay, ka izay mahazo eto dia mitondra ny volany any Frantsa.
Sahobakaka ambody riana !
Efa miala any ny tafiky ny mpikatsaka an-drafahamarinana ary manampy azy ao ihany koa ny ekipan-dramilaranondranonina ry Jean handrava ny mandan-drabekolikoly,
Sosialim-bahoaka Manome tanana ny CUA ny VITAFOAM
Nanolotra kidoro miisa 60 ho an�ny kaominina Antananarivo Renivohitra ny orinasa VITAFOAM omaly 14 aprily 2017 tetsy amin�ny Lapan�ny tan�na Analakely.
Raharaha Claudine A&C Andrasana ny fanazavan�ny filoha
Na inona na inona zava-misy eto amin�ny firenena, dia mbola i Hery Rajaonarimampianina no mitantana an�i Madagasikara na dia maro aza ireo kiana mivaivay mihatra aminy, indrindra fa taorian�ny raharaha Claudine Razaimamonjy.
Nampiaka-peo ny vondron�ny sendika Havereno ary tsarao i Claudine A&C
Henjana ny fanambaran�ny randrambaon'ny sendika na ny Firaisan-kinan�ny sendika eto Madagasikara (SSM) mikasika ny raharaham-pirenena, indrindra fa ny raharaha Claudine Razaimamonjy.
Loka be paska Olona 100 no notoloran'ny Orange Madagascar fanomezana
Olona 100 omaly no notoloran'ny orinasam-pifandraisana Orange Madagascar fanomezana teny amin'ny foiben-toerany eny Ankorondrano.
Mpitandrina Rabeharivelojaona Lantoniaina �Fanonganana ny fanjakan�ny devoly ny Paska�
Anisan�ireo nahazo fanasana hanatrika ilay fivoriana niompana tamin�ny fanorenana ifotony natao teny amin�ny Espace dera omaly, ny mpitandrina Rabeharivelojaona Lantoniaina.
Ny teny mandalo
Vani-potoana hitrangan-javatra tokony hahataitra ny fiarahamonina hitodika bebe kokoa amin�ny raharaham-pirenena sy ny hoaviny tahaka izao tokoa no manaporofo mivaingana fa mandalo ny teny.
Amboanana-Arivonimamo Nanolo-tanana amin�ny famatsian-drano ny Amerikanina
Nahazo rano fisotro madio ny fokontany Alarobia kely sy Ambohimanambola samy ao amin�ny kaominina Amboanana Distrikan�Arivonimamo.